देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हुने सेवाकाइ | Nepali Christians
देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हुने सेवाकाइ
January 21, 2016 5:07 pm by: Admin Category: Articles A+ / A-
देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हुने सँगती, सम्मेलन तथा उत्सव कार्यक्रमका प्रतिस्पर्धाले नेपाली इसाई समुदायलाई भौतिक कृपावादको दास बनाई रहेको छ । यो दासपनको सफलता कमाउन मानिसहरू यसरी लागिपरेका छन् कि जसका कामहरूले जिउँदो कामलाई जिउन नै दिएका छैनन् ।
भूकम्पको दु:खद समयपछि केही यस्ता इसाई सम्मेलन कार्यक्रमहरू भए जसले करोडौं खर्च गरेका थिए । आउने केही दिनपछि पनि टुडिखेल र रंगशालामा करोडौंको बजेटमा केही कार्यक्रमहरू हुने तय भएको छ । मोटरसाइकलको सुसमाचार देखि भृकुटीमण्डपको पश्चताप कार्यक्रमले इसाई समुदायलाई हेर हामीले पनि यस्तो गर्न सक्छौं भन्ने निर्भरता देखाएको भान भएता पनि देश रोएको बेलामा यो भौतिक कृपावादको दास बन्ने अभ्यास भएको पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
भूकम्पको चोटले पिल्सिएका छिमेकीहरू आफन्तको निधन र विभिन्न खाँचोहरूका कारण जीवनसँग लडिरहेका बेला हामीचाहिँ प्रार्थना गर्न र भजन गाउन करोडौं खर्च गरेर धार्मिकता कमाउने प्रयास गरिरहेका छौं । छिमेकीहरूको पीडामा सहभागी बन्नुपर्ने ठाउँमा हजारौंको हुल जम्मा गरेर हामी मात्र रमाउनु कहाँसम्म असल हुन्छ ?
मलाई लाग्छ हाम्रो जीवनमा भएको पापको एउटै मात्र स्थायी समाधान र हामीले प्रभूलाई दिनसक्ने आराधनाचाहिँ हाम्रो हृदयमा येशूको प्रेमलाई राख्नु हो । येशूको प्रेमले ठूलो भिडहरू भन्दा पहिला एकजना मृत्युसँग लडिरहेको मानिसलाई देख्दछ । बिधुवा र टुहुराहरूलाई देख्दछ । अशक्त र दुर्बलहरूलाई देख्दछ । तर हाम्रो दृष्टिकोण फरक रह्यो । हामीले गरेका सुसमाचारका कार्यक्रमहरू फरक भएका छन् । प्रभूसँग सँगती गर्ने तरिका फरक । कस्तो भिन्नता हो यो ? मोटरसाइकल देखाएर बाँच्नुहोस् भनिन्छ र सार्वजनिक स्थलहरू भाडामा लिएर एकता र क्षमाका प्रार्थना गरिन्छ ।
म ठूलो मैदानहरूमा गरिने बिशाल सम्मेलनहरूको विरोधी होइन । भिडहरूको महिमा चाहने र भौतिक दासपनमा रमाउने आर्थिक प्रस्तुतिकर्ताहरूको विपक्षमा उभिएर केही फरक गरौं भन्ने व्यक्ति मात्र हुँ । म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु । काठमाडौंमा करोडौं खर्चेर केही इसाईहरू आफूमात्र रमाईरहने अभ्यास गरिरहदाँ पोखरेली ख्रीष्टिय समाज अन्तर्गतको संस्था “असल छिमेकी नेपाल” ले गोर्खामा रहेका भूकम्प पिडितहरूका निम्ति न्यानो माया पुर्याईरहेको छ । यो अवस्थामा काठमाडौंले पोखराबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौंमा बसेर सुसमाचारको फरक धार बनाउनेहरूले पनि ठूलो भिडको उपस्थिती छोडेर येशूको पहिलो प्राथमिकतालाई खोजे हुने थियो । राजधानी केन्द्रित मण्डलीहरूले भूकम्प पिडितका निम्ति केही नगरेका भन्न खोजेको होइन; बिलिभर्स मण्डली र बप्टिष्ट चर्चले गरेका कामहरूको प्रसंशा जति गरे पनि कम नै हुन्छ । अन्य: संघसंस्था तथा स्वतन्त्र मण्डलीहरूले पनि सकेसम्म गरेकै हो ।
तर यिनीहरू को हुन् ? जो देशको वर्तमान समस्यामा आफूहरू मात्र रमाउने अभ्यास गर्दैछन् । करोडौं खर्चेर येशूको नाउँमा महोत्सव मनाउँदैछन् । हामीले सम्मेलन गर्ने मौका बिगतमा थुप्रै पाएका हौं; भविष्यमा पनि पाउनेछौं । तर देश यसरी दुखेको बेला, छिमेकी लडेको बेला उठाईदिने यो भन्दा असल मौका सायद कहिल्यै नपाऔंला । यो नै येशूको प्रेम बाँड्ने असल मौका पनि हो ।
यसो भनिरहँदा मलाई यो पनि थाहा छ कि हामीहरूमध्ये कतिजना भान्सा कोठामा उल्टो परेर खसेको जाम लगाइएको पाउरोटी जस्तो छौँ । यदि हामीलाई यस्तै अबस्थामा छाड्ने हो भने, “सेवाकाइको नाउँमा” अझ धेरै कुरालाई एकदम नै फोहोर बनाउनेछौ भन्ने कुरा पक्का छ । तर आर्थिक प्रस्तुतीकरणको सम्मेलन, आर्थिक दासपनको सेवाकाइले तपाईं र मलाई परमेश्वरको भावना विपरीत बगाईरहँदा हामी चाहिँ सेवाकाइको नाटक गर्ने ?
देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हुने सेवाकाइ Reviewed by Admin on Jan 21 . देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हुने सँगती, सम्मेलन तथा उत्सव कार्यक्रमका प्रतिस्पर्धाले नेपाली इसाई समुदायलाई भौतिक कृपावादको दास बनाई रहेको छ । यो दास देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हुने सँगती, सम्मेलन तथा उत्सव कार्यक्रमका प्रतिस्पर्धाले नेपाली इसाई समुदायलाई भौतिक कृपावादको दास बनाई रहेको छ । यो दास Rating: 0
नेपाली इसाई चलचित्र नचल्नुमा दर्शकह...बालगृहहरूमा हुने धर्मपरिवर्तनको सवा...